သက်ထွန်း၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Started this discussion. Last reply by သက်ထွန်း Oct 3, 2014.3Replies 1 Like
ကိလေသာရှိသေးသူ၏ ဒါနပြုမှုနဲ့ ကိလေသာ မရှိတော့သူ၏ ဒါနပြုမှု နှလုံးသွင်းမတူညီပုံနဲ့ အကျိုးပေး ကွားခြားပုံကိုလည်းကောင်း၊ ကိလေသာရှိသေးသူ၏ သီလဆောက်တည်မှုနဲ့ ကိလေသာ မရှိတော့သူ၏ သီလဆောက်တည်မှု…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
သက်ထွန်း သည် thein wai's၏ 'တရားအားထုတ်မည့်သူ၌ ရှိရမည့်အင်္ဂါ၅ ပါး။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"တရားအားထုတ်တယ် ဆိုရာမှာ ၀ိပဿဿ နာတရား နဲ့ ကုသိုလ်တရား (၂)မျိုးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေလိုပါ တယ်။ ၀ိပဿ နာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင် သစ္စာ(၄)ပါးကိုယုံကြည်ခြင်း၊ ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ ဖြစ်ပျက်ခြင်း သာရှိသည်ကို သဘောပေါက်ပြီးသူဖြစ်ခြင်း၊ သဘောပေါက်ထားသည့်အတိုင်း…"
သက်ထွန်း သည်thein wai's ၏ 'ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံပြတ်ပုံ တရားကို အလွယ်တကူ နားလည် သဘောပေါက်ကြစေရန်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
သက်ထွန်း replied to သက်ထွန်း's discussion 'ဒါန(၂)မျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့ သီလ(၂)မျိုးအကြောင်းအကျိုး'
"အထိုက်အလျှောက်မှန်ကန်သင့်မြတ်စွာ ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်နဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှလုံးသွင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ဖြေကြားချက်အတန်အသင့်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့ အကျိုးပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေပေးတာ လိုအပ် နေသေးပါတယ်။ ဥာဏ်ကျယ်စေခြင်လို့ စဉ်းစားပြီး ဖြေပေးပါအုံး။"
သက်ထွန်း replied to လှိုင်ကျော်ထွေး's discussion 'သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်အောင်'
"နံပါတ်သုံး မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခြင်း သုံးမျိုးကို မိမိကိုယ်တိုင်လိုက်နာပြုကျင့်နေမှသာ နေ့စဉ်သာသနာနဲ့တွေ့တာ အစစ်အမှန်ပါဆိုပြီး ဦးဇင်း ရဲ့ဆွေးနွေးချက်အပေါ် ပြန်လည်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ မကောင်းမှုစိတ် ကောင်းမှုစိတ်နဲ့…"
"ကိလေသာလောင်စာကုန်အောင်လုပ်နည်းကို ဟောကြားထားတဲ့ တရားတော်ကို သိရှိနားလည်သူသာ သာသနာတော် ရဲ့ထွန်းလင်းတဲ့အလင်းရောင်ရသူလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလို ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ လာကြုံတွေ့ရာ၌ မိမိကိုယ်မိမိ သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ခံယူနိုင်အောင်…"
M replied to သက်ထွန်း's discussion 'ဒါန(၂)မျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့ သီလ(၂)မျိုးအကြောင်းအကျိုး'
"ကိလေကုန်ပြီးတဲ့ ရဟန္တာအရှင်တွေကတော့ သီလအရာမှာ ကျွန်မတို့လို မကျိုးပေါက်အောင် သတိထားနေစရာ မလိုတော့ဘဲ ကိလေသာချူပ်ပြီးသူတို့ဘာဝ အလိုအလျောက်ကို မြဲမြံစင်ကြယ်နေပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတို့မှာသာ ဒေါသမောဟတွေ ရှိနေသေးလို့ ဒီကိလေသာတွေက…"
Thein Naing Ohn replied to သက်ထွန်း's discussion 'ဒါန(၂)မျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့ သီလ(၂)မျိုးအကြောင်းအကျိုး'
"ကိလေသာရှိသေးသူ၏ သီလဆောက်တည်မှုနဲ့ ကိလေသာ မရှိတော့သူ၏ သီလဆောက်တည်မှု နှလုံးသွင်းမတူညီပုံနဲ့ အကျိုးပေးကွာခြားပုံကို စတုမဟာရာဇသုတ်မှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။"
Thein Naing Ohn liked သက်ထွန်း's discussion ဒါန(၂)မျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့ သီလ(၂)မျိုးအကြောင်းအကျိုး
သက်ထွန်း replied to နီစံ (အနီ)'s discussion 'လောကုတ္တရာ စာမေးပွဲ ကဏ္ဍ'
"ပဋိစသမုပ္ပါဒ် အလည်ရပ်ရန်အတွက် ပရမတ်ခန္ဓာ(ခန္ဓာငါးပါး)၏ ဖြစ်ပျက်တ၇ားများကို မဂ်ဥာဏ်လက်နက်ဖြင့်ပယ်သတ်ရပါမည်။"
သက်ထွန်း postedadiscussion
ကိလေသာရှိသေးသူ၏ ဒါနပြုမှုနဲ့ ကိလေသာ မရှိတော့သူ၏ ဒါနပြုမှု နှလုံးသွင်းမတူညီပုံနဲ့ အကျိုးပေး ကွားခြားပုံကိုလည်းကောင်း၊ ကိလေသာရှိသေးသူ၏ သီလဆောက်တည်မှုနဲ့ ကိလေသာ မရှိတော့သူ၏ သီလဆောက်တည်မှု နှလုံးသွင်းမတူညီပုံနဲ့ အကျိုးပေးကွာခြားပုံကို ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်၊ အမျိုးသမီးများမှ ဦးစားပေးဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ--See More
သက်ထွန်း သည်kaungsu's ၏ 'ကာမဂုဏ်တို့၏သာယာဖွယ် နှင့် အပြစ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
"ပဋိစသမုပ္ပါဒ် အလည်ရပ်ရန်အတွက် ခန္ဓာ(၅)ပါးမှ မည်သည့်ခန္ဓာမဆို ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းများဖြင့်သာ ပြီးဆုံးနေသည်ကို အကြိမ်ကြိမ်မြင်အောင် အသိတရားခိုင်မြဲသည်အထိ ရှုမှတ်ပါ ထိုရှုမှတ်မှုခိုင်မြဲချိန်တွင် အတ္တပျောက်ပြီး အနတ္တကို ထင်ထင်လင်းလင်း…"
သက်ထွန်း သည် A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာအမေးအဖြေကဏ္ဍ' အဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မြတ်တယ်ဆိုတာဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ အကျိုးကျေးဇူးပိုရတာကိုပြောလိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ငွေကြေး စည်းစိမ်ဥစ္စာပါများကြွယ်ဝခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းများဟာ လောကီအကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့။ ဒီအကျိုးကျေးဇူး တွေရအောင် လှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ အမှုပြုရတယ်လေ။ ဒီလိုပြုရာ ဘုရားရှင်ဟာ…"
သက်ထွန်း joined A BuddhismworldAdmin's group
သက်ထွန်း သည် မူကြိုဆရာ's၏ 'သေချိန်မကျဘဲသေရသူများ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အသက်ရှည်သော်လည်း ကိလေသာကင်းပြတ်စေကြောင်း ဥာဏ်မျက်စိဖွင့်ပြီး ရှုမြင်ခြင်းမရှိရင် အကျိုးမထူး ပါဘူး ဒါ့ကြောင့်အကျိုးထူးရပြီး နိဗ်ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရေး ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။"
2:33pm အချိန်ဇူလှိုင် 3, 2014, တွင် kaungsu မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။